Nhọrọ nke akwụkwọ akụkọ kacha mma
Nwunye m ahuru n'anya nke Samantha Downing dere
Ọtụtụ mgbe, ndị mbụ a na-aghọgbu n'okwu ikpe kachasị njọ, yana ndị a na-atụghị anya ya, bụ ndị ikwu nke ogbu mmadụ. Na akụkọ ifo ejirila nlezianya mee ihe n'oge dị iche iche iji mee ka anyị nweta echiche ahụ nke ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche. Iji banye n'ime omimi, ihe niile na-abịakwute anyị site n'echiche ...
Purgatory, nke Jon Sistiaga dere
O yikarịrị ka ihe kacha njọ abụghị hel nakwa na eluigwe adịghị njọ. Mgbe enwere obi abụọ, Purgatory nwere ike ịnwe ntakịrị ihe niile maka ndị na-akwụsịghị ikpebi. Ihe na-agaghị ekwe omume ọchịchọ ma ọ bụ oké egwu; nke agụụ na-enweghị akpụkpọ ...
3 akwụkwọ kacha mma nke Camilla Läckberg dere
Akwụkwọ akụkọ mpụ Nordic nwere na Camilla Läckberg otu n'ime ogidi ya kachasị ike. Ekele Camilla na mmadụ ole na ole ndị ode akwụkwọ, ụdị nchọpụta a akpụpụtala ihe kwesịrị ekwesị na ọnọdụ ụwa. Ọ ga -abụ maka ọrụ ọma Camilla na ndị ọzọ dị ka ya ...
Egwuregwu Ikpeazụ, nke JD Barker dere
Akwụkwọ Nsọ akọwaworị ya n'okwu ahụ «Qui amat periculum, in illo peribet«. Ihe dị otú ahụ onye ọ bụla hụrụ ihe egwu n'anya na-ejedebe na ogwe aka ya (nsụgharị n'efu site na). Mana ọdịda ahụ nwere na amaghị m ihe na-adịghị mma. Karịsịa maka dabere n'ụdị mmadụ ma ọ bụ dịka ihe…
Ụbọchị Anyị Hapụrụ, nke Lorena Franco
Ụzọ ntụnye isi ịbịaru nso ngụkọ. Okwu ọ bụla nwere njedebe ya na njedebe nke ịdị adị na-emikpu anyị n'ime mmiri mmiri ozuzo nke ihe omimi, okpukpere chi ma ọ bụ nanị egwu dị mkpa nke na-egosi ụbọchị anyị. Ndị dị ndụ na-agbalị ka onye na-ewe ihe ubi ghara ịhụ ya. N'ihi na ọnwụ ...
Iwu nke Wolves, nke Stefano de Bellis dere
Ọ ga-adịrị Luperca, ụdị anụ ọhịa wolf nke ara Romulus na Remus. Isi okwu a bụ na akụkọ akụkọ a na -apụghị ịgbagha agbagha dabara n'ụzọ zuru oke na akụkụ nke ọhụụ nke Alaeze Ukwu Rom dị ka ọdịbendị a na -apụghị ịgbagha agbagha ma haziri ahazi, nwere ebumpụta ụwa maka ịlanarị na ọbụna ịdịgide. Maka enweghị mmepeanya ọzọ ...
Premonition, nke Rosa Blasco dere
Ebe ọ bụ na Cassandra na mgbaasị ọchịchịrị ya nke ọ nweghị onye kwenyere, egwu ka bụ naanị ịmụrụ anya maka ọdịnihu dị oke njọ. Edeela ọtụtụ akụkọ ụmụnwaanyị n'echiche nke nghọta ma ọ bụ echiche nke isii. Maka na ha bụ ndị akụkọ ihe mere eme na -enwe ọ ...
Oge Mgbaghara nke John Grisham
Steeti Mississippi na -echekwa ụdị akụkọ ojii nke United States mepere anya. Na John Grisham nwere n'uche ya inyoba anya na mgbagha miri emi dị n'etiti omume ekwuru na West na ebe siri ike mmeghachi omume dịka steeti ndịda a ...
Peeji1 Peeji2 ... Peeji24 Ọzọ →